"Garoomada Albaabadu U Xidhan Yihiin Waxay Dhaawac Aan Laga Soo Kabanin U Geysanayaan Kubadda Cagta" - Gool24.Net
“Garoomada Albaabadu U Xidhan Yihiin Waxay Dhaawac Aan Laga Soo Kabanin U Geysanayaan Kubadda Cagta”
Tababarihii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger ayaa ka digay dhaawac muddo dheer aan laga soo kabannin oo garoomada madhan ee taageereyaal la’aanta ah ay u geysan karaan kubadda cagta.
Wenger waxa uu qiray in xalka ugu fiican ee lagu sii wadi karayo horyaallada kubadda cagtu ay yihiin in taageereyaasha laga xidho garoomada, laakiin waxa uu haddana rumaysan yaahy in taasi ay dhaawaca xun ku tahay ciyaaraha haddii muddo bilo ah sidaas lagu sii socdo.
“Miyey dhaawac waqti dheer ah keeni doontaa taageereyaal la’aantu? Waan ku qanacsanahay taas.” Ayuu yidhi Wenger oo waraysi siinayay telefishanka beIN Sports.
Macallinkan hore waxa uu xusay in xalka kubadda dib ugu bilaabmi karayso xilliga dhow ay tahay in garoomadu madhnaadaan laakiin si degdeg ah go’aan looga gaadho in lasoo celiyo jamaahiirta, waxaanu yidhi: “Waxay noqon kartaa xalka muddada dhow, maaha midka muddada dheer, laakiin waa go’aanka ugu wanaagsan ee xili ciyaareedku uu ku socon karayo. Caafimaadkeenna ma gelin karno khamaar sidaa u weyn, waa inaynu badqabno. Qofna ma rumaysan karo in badhtamaha July in aynu gebi ahaanba bad-qab noqon doono.”
Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ayaa dib loo bilaabi doonaa bisha June, sidaas oo kalena waxa isla waqtigaas lagu soo laabanayaa LaLiga iyo Ligue 1, hase yeeshee waddanka Jarmalka ayaa toddobaadkan ay dunida oo dhan daawanaysay markii Sabtidii dib loogu soo laabtay.
Si horyaalladu usii socon karaan, FIFA ayaa ogolaatay in kooxuhu sameeyaan beddel shan ciyaartoy ah kulamada maxalliga ah, waxaanay sababtu tahay in la yareeyo dhaawacyada maadaama muddo dheer aanay ciyaartoydu tababar samaynin.
Wenger oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii ay kasoo fushay fikraddan, ayaa waxa uu yidhi: “FIFA ahaan, waxaanu ogolaanay shan beddel sababtoo ah ciyaaraha oo aad iskugu dhadhow. Waxa aan rumaysanahay in ciyaarta ugu horreysa ay adag tahay in lagu go’aan qaato. Waxa aan aaminsahay inay fikraddu aad u fiican tahay, sababtoo ah kooxaha yaryar lama ciyaari karaan laacibiinta waaweyn saddex maalmood oo kasta, markaa waxay u ogolaanaysaa inay isticmaalaan laacibiintooda ugu wanaagsan.”